देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ? - Kohalpur Trends
देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
२० वैशाख, काठमाडौं । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयसँगै धेरैको चासो छ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्लान् ?
एक नेताका अनुसार देउवाको बुझाइ थियो, ‘२० चैतको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास लिन सदनमा आउँछन् । ओली विश्वासको मत नपाउने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।’
देउवाले अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा जति सक्यो चुनावमा जाँदा बढी लाभ हुने देखेको नेताहरु बताउँछन् । डेढ÷दुई वर्षपछि चुनाव गर्ने हो भने माओवादी र एमाले मिल्ने, एमाले एकढिक्का हुने सम्भावना रहने भएकाले अहिले चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई लाभ हुने उनको विश्लेषण छ ।
अब गणितले साथ दिन्न
Previous Previous post: सबैका लागि पाठ : भेरी अस्पताल
Next Next post: आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ?